Olana goavana 2 taona 5 volana lasa izay #969
Miaraka aminà solosaina vitsivitsy Paywares.ALL ao amin'ny ahy FSX dia tapaka. Tsy misy radio sy GPS .....
Vao haingana no nanamboatra ny zava-drehetra ... tsy misy fomba hafa hodiako intsony. Noho izany, misy fomba hanamboarana izany, ary inona no afobe? Inona no tsy mety amin'izany?
Olana goavana 2 taona 5 volana lasa izay #970
Tsy tianao izany, tsy maintsy manao toy izany koa aho amin'ny toe-javatra maro. Ny zavatra voalohany dia ny fanesorana ny rindrambaiko izay mety hanao izany. Ny zavatra manaraka dia ny mamafa ny tena FSX cfg, ary atsangano indray FSX, dia hanolo ny cfg amin'ny iray hafa, toy ny rehefa navoaka voalohany FSX. Mbola ao daholo ny rindrambaiko efa azonao alaina .fa tsy maintsy hanaiky ny valinao indray ianao.
Olana goavana 2 taona 5 volana lasa izay #984
Tokony nampiana aho fa ny iray amin'ireo programa fandoavam-bola izay nampidirinao dia mety miteraka ordinatera nozaraina FSX to become corrupt. Avy amin'ny fanoritsoritanao, dia azo inoana fa ao amin'ny folder folder gauges. Ny banky dia toy izany, nanimba ny radiostack sy GPS ny ordinatera. Manantena aho fa tsy mila manomboka indray ianao, fa raha toa ka ataoko ao anaty loha-hevitra ho an'ireo izay manao izany dia ao amin'ny FSX faritra . Manantena aho fa manampy izany
Olana goavana 2 taona 5 volana lasa izay #990
Ny zavatra mahagaga dia, miasa izy ireo. Rehefa mandefa fiaramanidina vitsivitsy aho, dia lasa izy ireo.
Rehefa avy nametraka ny fiaramanidina aho, azafady ny ATC clear etc etc .. izy ireo dia niverina, samy izy ireo. Mahafatifaty hafahafa. Heveriko fa niteraka azy io ny PMDG 747. Nesorina izy izao ka mieritreritra fa tsara.
Misaotra ny fanampiana ihany.